Giphy inotangisa keyboard kugovera maGIFs | IPhone nhau
Giphy inotangisa keyboard ye, fembera chii? Goverana maGIF
Wanga uchifunga here kuti kwaitove nekhibhodi yezvinhu zvese? Zvakanaka, wanga wakanganisa. Kune makadhibhokisi ezvese zvinhu, kunyangwe pachezvangu ndinofanira kubvuma kuti hapana chimwe chazvo chinondibata (pamwe Microsoft Izwi Rekuyerera, asi ini handina kukwanisa kuyedza izvozvi). Uye handigoni kutaura kuti chikumbiro chaGiphy chinondibata, a chinjana keyboard izvo zvakagadzirwa nechinangwa chekurerutsa iro basa rekugovana inofamba mifananidzo uye inouya ine zita re Giphy makiyi.
Dambudziko neiyi Giphy keyboard ndeyekuti ndicho chinhu chakanyanya kukosha chaunogona kufungidzira. Zvekusina, haina autocorrect. Chero zvazvingaitika, ini handifunge kuti kunyora ndechimwe chinhu chakagadzirwa nevakagadzira chishandiso ichi. Izvo zvavanofanirwa kuve nehanya nazvo mashandiro ayo, uye zvinoita kwandiri kuti haina kunyatsonaka kushandisa. Uye zvakaipisisa pane zvese, hazvibvumirane nemaapplication anoshandiswa zvakanyanya senge Tweetbot. Hatichataura nezveWhatsApp futi.
Giphy inoita kuti zvive nyore kwatiri kuti tigovane maGIF
Ndisati ndamboiyedza, ndakafunga kuti kutumira a GIF nekhibhodi iyi zvingave zviri nyore sekutumira sticker mune mameseji app. Ndakanga ndakanganisa sei. Izvo isu zvatinofanirwa kuita kutumira iyo GIF kusarudza imwe yezviripo zvikamu, bata paGIF ku teedzera iyo ku clipboard, tinya kwechipiri mune imwe nzvimbo yatinogona kuisa mavara kuti tione sarudzo yeku "Namatira" uye unamate. Kana iyi sarudzo ikasaonekwa muTweetbot uye WhatsApp isingawirirane ... iyi keyboard haina zvainobatsira kwandiri.
Asi hazvisi zvese zvaizove zvakashata: kana tikabaya kaviri paGIF, yaigona kuichengetedza mune zvatinoda kuti tikwanise kuishandisa gare gare. Izvi zvinogona kuuya zvinobatsira kuchengetedza zvido zvedu uye kuzvishandisa mukutaurirana kweanowirirana mameseji manyorerwo (usafunge nezveTeregiramu nekuti yatove neGIF yayo yekutsvaga injini). Imwe pfungwa yakanaka mutengo wayo, sezvo iri Giphy Keys dzakasununguka zvachose. Wakambozviedza here? Ko izvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Giphy inotangisa keyboard ye, fembera chii? Goverana maGIF
Apple Inoburitsa Yechina Beta yeIOS 9.3.2; pane yeruzhinji vhezheni
Apple inomutsa kugadzirwa kwe iPhone SE kuzadzikisa kudiwa